Soo dejisan PowerISO 7.5 iyo 7.3 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariGubasho CD & DVDPowerISO
Qeybta: Gubasho CD & DVD
Bogga rasmiga ah: PowerISO
PowerISO – software awood leh in ay la qaabab image weyn ee saxanno shaqeeyaan. software The awood u furo, gubi, abuuro, edit, cadaadin, sir, kala, diinta images galay qaabab kale oo korto drive a dalwaddii. PowerISO waxaa loo isticmaalaa in la abuuro saxannada boot iyo drives flash si loo soo dajiyo nidaamka qalliinka iyo bilowdo kombiyuutarka. Sidoo kale PowerISO waa inay awoodaan inay Cudarada galay qolof nidaamka qalliinka. PowerISO leedahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Taageerada qaababkan caanka ah ee images disc
shaqeynta balaaran halka la files ka shaqeeya
Kordhaya on drive a dalwaddii
Abuurista saxannada boot iyo drives flash
Soo dejisan PowerISO
Faallo ku saabsan PowerISO
PowerISO Xirfadaha la xiriira
Agabka awood leh in ay ka shaqeeyaan iyada oo qaabab image kala duwan ee CD iyo DVD. Sidoo kale software ka taageertaa Abuuridda sidayaal xogta bootable.
software multifunction The si ay u qoraan iyo edit saxanno ah. software waxay leedahay Tilmaamo badan oo dheeraad ah si ay ula xogta saxanno shaqeeyaan.
BDtoAVCHD – softiweer waxaa loogu talagalay in loogu badalo Blu-ray disk-yada iyo faylasha HD MKV qaab AVCHD iyadoon tayo la lumin oo gacanta la dhigo cabirka si loogu keydiyo xogta diskiyada yar-yar.
software waxaa loogu talagalay in nuqul DVD-by siyaabo kala duwan oo taageero ka heerarka casri ah si ay u garab ilaalinta naqilkii.
Macaamiil caan ah ayaa ku soo biiraya wada hadalka. Noocaanku wuxuu leeyahay qaabab gaar ah oo loo adeegsado shabakadaha bulshada.